भ्रष्टाचार के हो ?… किन हुन्छ ? र कसरी रोकिन्छ ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कुवेतमा राजकुमार शाह हराए, खोजीको लागि परिवारबाट अपिल
दुर्घटनामा काँग्रेस नेता वासु कोइरालको निधन →
भ्रष्टाचार के हो ?… किन हुन्छ ? र कसरी रोकिन्छ ?
Posted on 29/04/2010 by राजु गुरुङ्ग | १ टिप्पणी
भ्रष्टाचार के हो ?
आर्थिक हिनामिना, असामाजिक र अनैतिक कृयाकलाप र अन्य भ्रष्ट गतिबिधि जस्को परीणाम स्वोरुप राष्ट्रमा अनैतीकता पैदा हुन्छ आर्थत कुनै पद वा दायित्व लिएको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र हैसियतलाई दुरूपयोग गरी अनुचित ढङ्गबाट आर्थिक हिनामिना गर्ने काम नै भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार किन हुन्छ ?
मानिस सुविधाभोगी प्राणी हो । ऊ सधै सुविधा चाहन्छ । अर्थात सुख चाहन्छ । उसका इच्छा अनन्त छन् । इच्छापर्ूर्ति हुनु भनेको सुखको अनुभूति हुनु हो । अहिले विश्व मानव द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा रमाइ रहेको छ । आर्थिक पक्षमा सवल मानवले आफूलाई सुखी ठान्छ । ऐस आरामको सुखी जीवन बिताउने मुख्य माध्यम धनसम्पत्ति मानिएको छ । धन सम्पत्ति पनि चल र अचल रहेका छन् । चल सम्पत्ति भन्नाले रुपैया पैशा, सुन चाँदी हिरामोति मणी माणिक्य मानिन्छन् भने अचल सम्पत्ति जग्गा जमिन घर आदिलाई मानिन्छ । यी श्रोत साधन मानिसका आवश्यक वस्तुहरु हुन् । यस्ता श्रोत साधन प्रसस्त हुने मानिसले कतिसम्म सम्पत्ति राख्न पाउँछ त भन्ने सीमा पनि छैन । अर्थात राज्यले एक व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा कतिसम्म सम्पत्ति -चल अचल) राख्न पाउने भन्ने हद पनि तोकेको छैन । जसले गर्दा सम्पत्ति थुपार्ने होड चलिरहेको छ । यो होडले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको छ । हुनेको भकारीमा अन्न सडेको छ । नहुने भोकभोकै मर्न सक्छ । परिवारको मूलिमा आश्रीत हुने परम्परा छ । परिवारका सबै सदस्यले रोजगारीको अवसर पाएर आत्मनिर्भर हुने आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने अवसर राज्यबाट पनि सृजना हुन सकेको छैन । आफ्नो हैसियत अनुसार खर्च गर्ने होइन कि अर्काको देखासिकी गर्ने । फजुल खर्च जस्तै भोजभतेर, जुवा तास खेल्ने, लागूपदार्थ सेवन, सात्विको भोजन भन्दा तामसि भोजन तर्फढी अग्रसर हुने । आध्यात्मीक भन्दा भौतिक चिन्तनमा बढी रुची राख्ने, राष्ट्रिय चिन्तन भन्दा अन्तर्रर्ााट्रय चिन्तन बढी गर्ने, सामाजिक व्यवहारमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्ने, वास्तविकतालाई त्यागेर अवास्तविकतर्फबढी लालहित हुने । इमान्दारहरुको भन्दा बेइमानहरुको कदर हुने, बौद्धिक लगानी भन्दा भौतिक लगानीलाई सामाजिक मान्यता बढी हुने, पारिवारिक मोह बढी हुनु, आध्यामिक विचारधारा लोप हुँदै जानु र भौतिक चिन्तनको पराकाष्ट हुनु भ्रष्टाचारका मूल कारक तत्व हुन । भ्रष्टाचारलाई पुरुषार्थ मान्य सामाजिक मान्यताले गर्दा पनि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ ।
भ्रष्टाचार कसरी रोकिन्छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारी तबरबाट संस्थाहरु गठन भएका छन् । जस्तै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र । अख्तियार अन्तरगतका शाखाहरु क्षेत्रीय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पनि रहेका छन् । यी संस्थाहरु हात्तीको देखाउने दात मात्र भएका छन् । किन भने नेपाल विश्वका भ्रष्टचार बढी हुनु मुलुकको तेश्रो नम्बरमा परे के छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थाहरुमा नै भ्रष्टाचार छ भने उसले अरुलाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र्सव प्रथम मूल सङ्लो हुनर्ुपर्छ । भनिन्छ मूलको पानी कूलको छोरी, मूलको पानी र कूलको छोरीले कहिल्यै अहित गर्दैनन् । देशको राजनीतिको पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका रहन्छ । मुलुकको बागडोर संचालन गर्ने नेता र उच्च पदस्त प्रशासकहरु सदाचारी भए भने देशबाट भ्रष्टाचार स्वतः भाग्दछ । यहाँ त जो रक्षक उही भक्षक भएर मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा गाडिएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु त कताकता संरक्षण दिने नेताहरुको प्रवृति छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थाहरुले आफू वादी भएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छन । अदालतबाट सबुद प्रमाण नपुगेको भनी प्रतिवादी भ्रष्टाचारीको पक्षमा नै मुद्दा फैसला भएका छन् । यहाँ बढी भन्दा प्रतिवादी धेरै चनाखो र चतुरा छन् । प्रतिवादीहरु मुद्धा आफ्नो पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्ड भेद सबै नीति अपनाउँछन् । वादीदर्ता गर्ने पक्षले वादी दर्ता गरायो बस पुग्यो । सरकार वादी मुद्दाहरु प्रायः असफल नै भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र्सव प्रथम सम्पत्तिको सीमा तोकिनु पर्छ । नैतिक शिक्षा दिने व्यवस्था हुनर्ुपर्छ । च्रष्टाचारीलाई बर्ुइ बोकेर हिँड्ने राजनीतिक चरित्रको अन्त्य हुनर्ुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थालाई न्यायिक अधिकार दिनर्ुपर्छ । राज्यमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर सृजना गरेर आत्मनिर्भर हुने अवसर दिनु पर्छ । एक व्यक्ति एक रोजगार हुनर्ुपर्छ । सामाजिक फजूल खर्च नियन्त्रण हुनर्ुपर्छ । भौतिक होइन आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा बढाउनु पर्छ । जनतालाई परावलम्बि होइन स्वावलम्बि र अनुशासित बनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र सदाचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । अनिमात्र देश भ्रष्टाचार मुक्त हुन सक्दछ अन्यथा भ्रष्टाचारको एक नम्बरमा मुलुक पुग्न सक्छ ।
One response to “भ्रष्टाचार के हो ?… किन हुन्छ ? र कसरी रोकिन्छ ?”
Mission Pun Magar (Ramjalee) | 29/04/2010 मा 7:09 अपराह्न |
In Nepal impossible because in world number one corrupt I mean 99% officer.
UAE Exchange Transact and Win Contest 2013 “2nd Monthly Draw Winners”